RASMI: Kooxda Arsenal oo heshiis cusub ka saxiixatay Weeraryahankeeda da’da yar ee Gabriel Martinelli – Gool FM
(London) 04 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixatay ciyaaryahankeeda weerarka uga dheela ee Gabriel Martinelli.
Da’yarkan 19-sano jirka ah ee reer Brazil ayaa warqadda qalinka dul dhigay waxaana uu saxiixay heshiis cusub sanad kaddib markii uu Kooxda ku soo biiray.
Markii uu heshiiska cusub saxiixay Martinelli Macallin Mikel Arteta ayaa website-ka rasmiga ah ee kooxda Arsenal u sheegay: “Aad ayaan ugu farraxsanahay in Gabi uu heshiis cusub innoo saxiixay innaga.”
“Waa ciyaaryahan da’yar oo hibo leh, waxaana uu nagu soo jiitay qaab ciyaareedkiisa, hab dhaqankiisa iyo heerka shaqada.
“Waxaan rajeyneynaa inuu dib ugu soo laabto taam ahaanshihiisa oo aan horumarkiisa ku daawanno kooxdeenna.”
Gunners ayaa haatan fadhisa kaalinta siddeedaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo Martinelli uu noqday da’yarkii ugu horreeyey ee 10 gool xilli ciyaareedka u dhaliya Kooxda tan iyo Nicolas Anelka oo sidaasi u sameeyey kal ciyaareedkii 1998-99.
Heshiiskan cusub oo uu Arsenal u saxiixay Gabi ayaa ku soo aadaya maalmo yar kaddib markii Bukayo Saka isna uu qandaraaska u kordhiyey kooxda ku ciyaarta garoonka Emirates.